သင့်ကားအင်ဂျင်ကျနေပြီလားဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက် ၅ ချက်
"ကားအင်ဂျင်ကျတာ၊ အင်ဂျင်ကိုင်တာ၊ အင်ဂျင်တင်တာ၊ အင်ဂျင်အပေါ်ဖွင့်/အောက်ဖွင့်လုပ်တာ" ဆိုတာမျိုးတွေကို ကားလောက လူတိုင်းကြားဖူးကြမှာပါ။ အဲဒါတွေဘာကြောင့်လုပ်တာလဲ? ဘယ်လို အခြေအနေတွေမှာ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်သလဲ? အင်ဂျင်ရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို လုပ်တာလဲဆိုတာကို ဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြပေးပါမယ်။
ကျနော်တို့ဆီမှာသာ အင်ဂျင်ကျတာ၊ အင်ဂျင်ချတာ အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုးခေါ်ဝေါ်ကြပေမယ့် အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ Engine Overhaul လို့ပဲခေါ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ကိုင်တာ အင်ဂျင်ချတာဟာ ငွေကုန်ကြေးကျများပြီး ကျနော်တို့နိုင်ငံလို ဂျပန်ကျ တစ်ပတ်ရစ်ကားတွေ၊ ကီလို ၁ သိန်းကျော်အောင်သုံးပြီးသားကားတွေကို အသုံးပြုရတဲ့နိုင်ငံက ကားပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ အင်ဂျင်ကိုင်တာ၊ အင်ဂျင်ကျတာဟာ မလွဲမသွေ ကြုံတွေလာရနိုင်တာမလို့ ဗဟုသုတအနေနဲ့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ Engine Overhaul (အင်ဂျင်ကိုင်) လုပ်ဖို့လိုအပ်သလဲ?
အင်ဂျင်ကိုင်ရတော့မယ့် ကားတိုင်းလိုလို ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုက အင်ဂျင်ဝိုင်စားများလာတာပါပဲ။ ကားတစ်စီးကို အင်ဂျင်ဝိုင်လဲထားမယ်၊ အင်ဂျင်ဝိုင်သက်တမ်းပုံမှန် ကီလိုမပြည့်သေးခင် အင်ဂျင်ဝိုင်ခန်းသွားမယ်၊ အင်ဂျင်ဝိုင်လျော့သွားမယ်ဆိုရင် အဲဒါ သင့်ကားအင်ဂျင်ကျလာတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။ အင်ဂျင်ဝိုင်ဟာပုံမှန်အားဖြင့် အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းတွေကနေ ယိုစိမ့်တာ မရှိဘူးဆိုရင် လျော့ကျတာ မဆိုသလောက်လေးပဲရှိတတ်တာမျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် အင်ဂျင်ဝိုင်ယိုစိမ့်တာ ဘာမှမရှိဘဲ အင်ဂျင်ဝိုင် level ကိုတိုင်းတာကြည့်တဲ့အခါ ထည့်ထားတဲ့ level အမှတ်ထက်အများကြီးလျော့သွားတယ်ဆိုရင် အဲဒါ အင်ဂျင်ကျတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။
ဒါဆို အင်ဂျင်ဝိုင်စားတာ ဘာကြောင့်များလာသလဲဆိုရင်တော့ အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်းက pistons တွေမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ piston rings တွေပွန်းစားသွားလို့ပါ။ ဒါကြောင့် အင်ဂျင်ကိုင်ပြီဆို မဖြစ်မနေ မလွဲမသွေ လဲပေးရတဲ့ အစိတ်အပိုင်းက oil control rings တွေပါပဲ။ Oil control rings တွေကို ဆီထိန်းကွင်းလို့ ဝပ်ရှော့ဆရာတွေကခေါ်ကြပြီး အင်ဂျင်ထဲမှာရှိတဲ့ pistons တွေ အတက်အဆင်းလုပ်တဲ့အခါ ချောမွေ့စေဖို့ ချောဆီအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်တွေကို မီးလောင်ခန်းထဲမရောက်အောင် ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ အလုပ်ကို အဓိကလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အဲဒီ rings တွေက နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာ အင်ဂျင်ရဲ့ စလစ်လို့ခေါ်တဲ့ sleeve မီးလောင်ခန်းနံရံတွေနဲ့ ပွတ်တိုက်ပြီး အတက်အဆင်းလုပ်ရပါများလာတဲ့အခါမှာ ပွန်းစားကုန်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပွန်းစားကုန်တဲ့အတွက် သူထိန်းပေးရမယ့် အင်ဂျင်ဝိုင်တွေကို မထိန်းပေးနိုင်တော့ဘဲ အင်ဂျင်ဝိုင်တွေဟာ မီးလောင်ခန်းထဲကို ကျော်ဝင်ပြီး မီးလောင်ကုန်ပါတော့တယ်။ အဲဒါကြောင့် အင်ဂျင်ထဲက အင်ဂျင်ဝိုင်တွေ ခမ်းကုန်၊ လျော့လျော့ကုန်ရတာပါပဲ။
အင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်လဲထားပြီး မကြာခင် အင်ဂျင်ဝိုင် level တွေ အရမ်းလျော့နေကာ မကြာမကြာ အင်ဂျင်ဝိုင် လီတာဘူးသေးလေးတွေကိုင်ကိုင်ပြီး အင်ဂျင်ဝိုင်လိုက်လိုက်ဖြည့်နေရပြီဆိုရင်တော့ဖြင့် သင့်ကား မကြာခင်အင်ဂျင်ကိုင်ဖို့လိုနေပြီဆိုတာပါပဲ။
(အင်ဂျင်ဝိုင်လျော့စေတဲ့ အခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ (tappet seal) တိုက်ပစ်စီးကနေ ဆီယိုတာမျိုး main oil seal ကနေ ဆီယိုတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တာမလို့ သေချာစစ်ဆေးပြီးမှ အင်ဂျင်ကိုင်ဖို့၊ အင်ဂျင်ချဖို့ ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်)
အင်ဂျင်ကျ/မကျ သိနိုင်တဲ့ အခြားအချက်တစ်ခုက အင်ဂျင်မီးခိုးလိုက်တာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကားတစ်စီးရဲ့ အင်ဂျင်ဟာ ကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုရင် ကြည်လဲ့လဲရှိတဲ့ မီးခိုးပဲထွက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ အခြားထူးထူးခြား မီးခိုးရောင်တွေ (အမဲရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အပြာရောင်၊ အဖြူရောင်) စတဲ့ မီးခိုးရောင်တွေ အများကြီးထွက်လာပြီဆိုရင် အဲဒီကားအင်ဂျင်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ တစ်ခုခုမှားယွင်းနေပါပြီ။
အဲဒီလိုမီးခိုးရောင်တွေ အများကြီးရှိတဲ့ အထဲကမှ အင်ဂျင်ကျတာကို သိသာထင်ရှားစေတဲ့ မီးခိုးရောင်က နက်ပြာရောင် မီးခိုးပါ။ အဲဒီလိုနက်ပြာရောင် မီးခိုးထွက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ အင်ဂျင်ဝိုင်တွေ အင်ဂျင်ခန်းထဲရောက် မီးလောင်ကုန်လို့ပါပဲ။ အဓိက အားဖြင့်တော့ oil control rings ကြောင့်ဖြစ်ပြီး valve oil seal တွေ မလုံရင်၊ ပွန်းစားရင်လည်း အင်ဂျင်မီးခိုးလိုက်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို နက်ပြာရောင်မီးခိုးတွေ တသီတတန်းကြီးထွက်နေပြီ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်ကလည်းစားနေပြီဆိုရင်တော့ အင်ဂျင်ကိုင်ဖို့ ကျိန်းသေလိုအပ်နေပါပြီ။
၃။ အင်ဂျင် အသံထွက်တာ
အင်ဂျင်ခန်းထဲက ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အသံဗလံတွေထွက်လာတာဟာလည်း အင်ဂျင်ကျလာတဲ့ လက္ခဏာရပ်ပါပဲ။ အင်ဂျင်ခန်းထဲကနေ "ဂိုးဂိုးဂွက်ဂွက်" စတဲ့ အသံတွေထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ ဝပ်ရှော့ ဆရာကြီးတွေက အဲဒီလိုအသံတွေကို အောက်သံထွက်တယ်လို့ခေါ်ပြီး အင်ဂျင်ကိုင်ဖို့ အချက်ပေးခေါင်းလောင်းထိုးနေပြီလို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒီလိုအသံတွေ ဘာကြောင့်ထွက်လာရသလဲဆိုရင်တော့ အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ သတ္တုနဲ့သံထည်အစိတ်အပိုင်းတွေ ပွန်းစားပြီး ချောင်ကုန်တဲ့အတွက် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ရိုက်ခတ်ရာကနေထွက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် bearing တွေပွန်းစားပြီး ကရိုင်းနဲ့ရိုက်ခတ်ရာကနေ ထွက်လာတဲ့အသံတွေရယ်၊ နောက် pistons ရယ် ပွန်စားနေတဲ့ (sleeve) စလစ် နဲ့ရိုက်ခတ်တဲ့အသံတွေပါပဲ။
အဲဒီလိုအသံတွေ ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ အင်ဂျင်ချပြီး အင်ဂျင်ကိုင်ဖို့ သေချာပေါက်လိုနေပါပြီ။
အင်ဂျင်အဆွဲအရုန်းမကောင်းတာကလည်း အကြောင်းအချက်များစွာရှိပါသေးတယ်။ ကျနော်အရင်ကလည်း ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့အင်ဂျင်အဆွဲအရုန်းကျစေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ အင်ဂျင်ကို အသေးစားပြုပြင်မှုလေးတွေလုပ်ပြီး အဆွဲအရုန်းပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပေမယ့် အင်ဂျင်ရဲ့အဓိကကျတဲ့ အင်ဂျင်ခန်းအတွင်းက (compression) ဆီနဲ့လေကို ဖိသိပ်အား ကျသွားပြီဆိုရင်တော့ အသေးစားပြုပြင်မှုလေးတွေပဲ လုပ်လို့မရတော့ဘဲ အင်ဂျင်ချပြီး အင်ဂျင်တစ်ခုလုံးကို ပြုပြင်ရတော့မှာပါ။
ပုံမှန်ကောင်းမွန်နေတဲ့ အင်ဂျင်တစ်လုံးကို compression tester နဲ့တိုင်းတာကြည့်မယ်ဆိုရင် အင်ဂျင်မီးလောင်ခန်း cylinder တိုင်းဟာ 100 Psi အထက်ရှိရမှာဖြစ်ပြီး cylinder တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ အနိမ့်ဆုံးနဲ့ အမြင့်ဆုံး ကွာခြားချက်က 10 Psi ထက်များလို့မရပါဘူး။ ဆိုလိုချင်တာက cylinder4ခုရှိတဲ့ အင်ဂျင်တစ်ခုကို တိုင်းတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် no. 1 cylinder က 120 Psi ရှိပြီး no.4cylinder က 90 ပဲရှိလို့မရပါဘူး။ အမြင့်ဆုံး Psi ရှိတဲ့ cylinder နဲ့အနိမ့်ဆုံး Psi ရှိတဲ့ cylinder တွေကြားက ကွာခြားချက်က 10 Psi ထက်ပိုများနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီအင်ဂျင်ကို engine overhaul လုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုအင်ဂျင်ရဲ့ ဖိသိပ်အား (compression) ကျသွားရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ piston ရဲ့ compression rings တွေပွန်းစားသွားတာ၊ နောက်တစ်ခုက cylinder ရဲ့ အတွင်းနံရံဖြစ်တဲ့ (sleeve) စလစ်နံရံတွေစားသွားတာကြောင့်ပါပဲ။
လောင်စာဆီစားနှုန်းများလာတာဟာလည်း အင်ဂျင်ကျလာတဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ဆီစားနှုန်းလည်းများလာတယ်၊ အဆွဲအရုန်းကလည်းကျလာတယ်ဆိုရင် အခြားဆီစားနှုန်းများစေတဲ့ ရောဂါတွေကို စစ်ဆေးနိုင်ပြီး အခြားရောဂါတွေမရှိဘဲ သိသိသာသာဆီစားနှုန်းများလာတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် သင့်ကားအင်ဂျင်ကျလာပြီလို ဆိုရမှာပါပဲ။
လောင်စာဆီစားနှုန်း ဘာကြောင့်များလာရသလဲဆိုရင် အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို လေနဲ့ဆီအရောအနှောကို ဖိသိပ်ရတဲ့ piston မှာရှိတဲ့ compression rings တွေမကောင်းလို့ပါပဲ။ Compression rings တွေမကောင်းတဲ့အခါ ဆီနဲ့လေအရောအနှောကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် မဖိသိပ်နိုင်တော့ဘဲ rings တွေရဲ့ အကြိုအကြားကနေ ဆီနဲ့လေတွေကို ယိုစိမ့်ထွက်စေပါတယ်။ အဲဒီလိုယိုစိမ့်ထွက်ပြီး အင်ဂျင်ဝိုင်ထားတဲ့ crankcase တွေထဲရောက်ကာ အင်ဂျင်ဝိုင် ဂိတ်တံက တစ်ဆင့် အခိုးအငွေ့တွေ မှုတ်ထုတ်လာစေတော့တာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ဒီဇယ်ကားတွေမှာ အင်ဂျင်ကျလာပြီဆိုရင် မီးခိုးလိုက်လာတာအပြင် အင်ဂျင်ဝိုင်ဂိတ်တံကနေ မီးလောင်ပြီးသား မီးခိုးငွေ့တွေရယ်၊ မလောင်ရသေးတဲ့ ဆီနဲ့လေအရောအနှောတွေရယ် မှုတ်ထုတ်တာကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရမှာပါပဲ။
အင်ဂျင်ချမယ်၊ အင်ဂျင်ကိုင်မယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေပြုပြင်လဲလှယ်ရမယ့် ပစ္စည်းတွေကတော့
Piston rings တွေ
Bearing တွေ (ပွန်းစားနေတယ်ဆိုရင် အသစ်လဲလှယ်ရပါမယ်)
Crankshaft (ကရိုင်း ပွန်းစားနေမယ်ဆိုရင် ကရိုင်း သ တာ ၊ သ မရအောင်ထိ ပျက်စီးနေရင် အသစ်လဲလှယ်တာ)
Cylinder နံရံတွေဖြစ်တဲ့ sleeve တွေ ပွန်းစားနေမယ်ဆိုရင် စလစ် ဘိုးရင်းထိုးတာ၊ စလစ်အသစ်ရိုက်တာ
Piston တွေ လဲလှယ်တာ၊ piston နဲ့ connection rod တို့ကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ gudgeon pins တွေချောင်နေရင် လဲလှယ်တာ
Engine head ပြုပြင်တာ၊ valve seal တွေ valve guide တွေ အသစ်လဲလှယ်တာ
အစရှိတဲ့ ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းတွေကို အကုန်အသေးစိတ်ပြုပြင်ရမှာပါ။ ဒီအချက်တွေကတော့ မိတ်ဆွေတို့ကားတွေ အင်ဂျင်ကျနေပြီလား? အင်ဂျင်တစ်ခုလုံးချပြီး engine overhaul လုပ်ဖို့လိုနေပြီလား? ဆိုတာသိနိုင်တဲ့ အခြေခံအချက်တွေပါ။ ဒီအချက်တွေကို သိရှိနားလည်ထားခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ကားအင်ဂျင် အမှန်တကယ် overhaul ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလားဆိုတာ ခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်ပြီး မလိုအပ်ဘဲ အင်ဂျင်ချ/အင်ဂျင်ကိုင်ပြုပြင်ခြင်းကနေ ရှောင်ရှားနိုင်မှာပါ။
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေများအားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတ ကြွယ်ဝကြပါစေခင်ဗျာ။
ယာဉ်သက်တမ်းတိုးရန် ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကို ပုဂ္ဂလိကသို့ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးရေးအတွက် မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေထွက်ရှိလာမှသာ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုဆို